War deg deg ah: Sargaal ka tirsan Ciidanka xoogga dalka oo lagu diley meel u dhow Madaxtooyadda - Awdinle Online
War deg deg ah: Sargaal ka tirsan Ciidanka xoogga dalka oo lagu diley meel u dhow Madaxtooyadda
October 19, 2019 (AO) – war hadana nasoo gaaray ayaa sheegey in G/sare Maxamed Saleebaan Abuukar oo ahaa taliyaha ururka gaar ah ee gorgor oo ay tababareen dowladda turkey caawa lagu meel u madaxtooyadda Soomaaliya.
Colonel Maxamed Saleebaan ayaa watay gaari yar waxaana la socdey ilaa 3 askari oo ilaalo u ahaa sargaalka la diley, hase ahaatee Colonel Maxamed Saleebaan ayaa u dhintay dhaawac ay u geesteen qaar ka mid ciimadda ilaaliya agagaarka madaxtooyadda Villa- Soomaaliya.
Waxaa kaloo lagu waramayaa in ay dhaawac yihiin labo askari mina uu dhintey kuwaa soo ka mid ahaa Ilaada Colonel ka.
Wixii faahfaahin ah dib ayaan ka soo sheegi doonaa.
Previous articleKulamadii Itoobiya iyo New York iyo qareenadii la bedelay: Badda Somalia oo halis ku jirtaq
Next articleQaab noocee ah ayuu u Dhacay Dilka Taliyaha Ururka Gor-gor ee XDS